Al-Shabaab oo hub isagu dhiibtay Beelaha Mandheera si ay gaarto hal hadaf | KEYDMEDIA ENGLISH
Al-Shabaab oo hub isagu dhiibtay Beelaha Mandheera si ay gaarto hal hadaf
Mandera khatarta ka jirta ayaa ah inay tahay meesha ugu weyn ee kasoo gudbaan dagaalyaanada Al-Shabaab ee ka yimaada Soomaaliya, kuwaasoo loo soo diro inay weerarada ka geysta wadanka Kenya.
MANDHEERA, Kenya - Magaalada Mandheera ee ku taalla cirifka bari ee woqooyiga Kenya waa meel aad adag in lagu noolaado, sababo dhinac amniga, kulaylka daran iyo adeegyada dowladda Kenya oo aan soo gaari-karin.
Al-Shabaab ayaa hub casri ah isagu dhiibtay qabaa'ilka ka soo kala jeeda labada dhinac ee magaaladda oo ku taalla xuduudka Soomaaliya, si ay u gaarto hadafka ah inay u fududaato weerarada ay ka fuliso Kenya.
Al-Shabaab ayaa mas’uul ka ah weeraro badan oo argagixiso oo ka dhacay Kenya tan iyo 2013.
Kooxdan argagixisada waxay kaloo xoojisay iskahorimaadyada qabaa'ilka magaaladda Mandheera, iyadoo u keentay hub casri ah oo siisay dhinacyada ku loolamaya xukunka iyo khayraadka dhulka.
Isku dhacyadan ayaa laga digay inay sii kordhaan inta lagu jiro xilliga doorashada soo socota ee Kenya oo sanadka dhacaysa, taasoo ka duwan kuwii hore kadib markii musharaxiinta sameeyeen kicin dadweyne.
Aminiyaat-ka Al-Shabaab, oo loo xilsaaray ururinta xogaha Sirdoonka, ayaa aad u galay Kenya labadii sano ee lasoo dhaafay, iyagoo dhalinyaro badan ka qortay gobolka Waooyiga Bari, oo Soomaali degto.
Gobolkan oo dayacnaa tan iyo waagii gumeysiga, ayaa dhawaan dowladda Kenya billowday in si dhab ah isha ugu hayso kadib markii hoy u noqdey Al-Shabaab, oo askar badan looga dilay 8 sano ee lasoo dhaafay.
Amni darada ayaa caado noqotay Gobolka, iyadoo dagaalyahanada Al-Shabaab ay si xor ah u dhex mushaaxayaan, kuwaasoo argagax ku haya shacabka, islamarkaana weerara xarumaha dowladda.
Comments Topics: al-shabaab kenya mandheera soomaaliya